Warbaahinta ‘African Arguments’ Oo Shaacisay Kaalinta Dekedda Berbera Ka Qaadanayso Isbeddelka Geeska Afrika | Himilo Media Group
Warbaahinta ‘African Arguments’ Oo Shaacisay Kaalinta Dekedda Berbera Ka Qaadanayso Isbeddelka Geeska Afrika
Hargeysa (Himilo) – Mareegta caanka ah ee African Arguments ayaa maanta warbixin ka qortay faa’iidada ay Somaliland u leedahay casriyeynta dekedda Bebera oo lagu wado inay noqoto marinka mandaqada Geeska Afrika.
Wakaallada wararka Somaliland ee SOLNA, ayaa soo xigatay qormada ay daabacday shabakada African Arguments oo fallan-qeysa siyaasadda iyo dhaqaalaha qaarada Afrika, oo si mug leh u sharraxday ahmiyada weyn ee Somaliland ugu fadhido heshiiskii ay la gashay shirkadda DP World.
Africa Arguments waxay sheegtay in Somaliland ay ku talaabsatay dimuqraadiyad iyo deganaansho siyaasadeed, inkastoo ay haystaan caqabado dhaqaale oo ay ka mid tahay shaqo la’aantu. waxa kaloo ay intaas ku dartay in xukuumadda Somaliland ay rajaynayso in heshiiska ballaadhinta dekeddu ay abuuri doonto fursado shaqo oo badan.
African Arguments waxay iftiimisay in deked cusub oo 400 oo mitir ah ee laga dhisayo Berbera ay dekedaas ka dhigi doonto mid xuddun u ah ganacsiga Geeska Afrika, isla markaana kor u qaadi doonto dakhliga dawladda Somaliland.
Warbixintu waxa lagu xusay in madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi booqashadii uu ku tagay imaaraadka carabta ay ka wada hadleen xoojinta cilaaqaadka labada dal. Iyadoo wasaaradda Arrimaha Gudaha ee imaaraadka carabtu ogolaatay dhawaan in fiisayso in muwaadiniinta reer Somaliland dalkeeda ku soo galaan baasaboorka Somaliland.
Ugu dambayn waxa warbixinta shabakada African Argument lagu sheegay in dawladda Itoobiya oo dadkeedu gaadhayaan 100 milyan ay dani ugu jirto heshiiska dekedda Berbera oo ay ku leedahay saami ah 19%. Waxaana mashruuca dekedda Berbera ku jira in la dhiso jidka isku xidha Berbera ilaa Wajaale oo ay ku baxayso lacag lagu qadaray 300 oo Milyan oo doolar.